खाना कसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ? जान्नुहोस् - साक्षी खबर खाना कसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ? जान्नुहोस् - साक्षी खबर
खाना कसरी पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ? जान्नुहोस्
साउन १८, २०७८ | २२३ पटक पढिएको
नेपाली भान्सामा समय र परिवेशअनुसार अनेकथरीका परिकार पाक्ने गर्छ । अनेक स्वादयुक्त यी खानाहरुमा विभिन्न किसिमका मसला र तेलको प्रयोग गरिन्छ ।